Mudamtoonni aantummaa ummataa dhugoomsuu qabu
Doktar Abiyyi Ahmad Ministira Muummee Mootummaa Rippablikii Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa ta’uun Bitooteessa 24 bara 2010 erga moggaafamanii kaasanii hojiilee guguddoo hojjechuurratti argamu.
Kanaanis iddoowwan gara garaatti keessumaa dhimma nagaafi tasgabbii, akkasumas tokkummaa biyyattiirratti rakkoolee mudachaa turan furuuf jiraattota Magaalaa Jigjigaa, Amboo, Maqaleefi Finfinnee waliin marii bal’aa taasisaniiru; yeroo gabaabaa kana keessattis jijjiirama fiduuf waliigalteerra gahuu danda’aniiru.
Kunimmoo rakkoolee biyyattii mudachaa turaniifi gaaffiilee ummataa deebisuuf, akkasumas ummata waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuuf tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban keessaa isa ijoodha.
Kana waliinis, miseensota kaabinee haaraa muuduun barbaachisaa waan ta’eef, kaleessa namoota 16f muudamni kennameera. Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataafis afyaa’ii haaraan filatameera.
Miseensotni kaabinee muudaman kunneen dandeettii, ga’umsaafi muuxannoo kanaan dura qaban bu’uureffachuun gara aangootti kan dhufan yoo ta’u, rakkoo biyyattii mudate keessaa baasuuf hojii guddaan kan isaan eeggatu ta’uu dursanii hubachuu qabu.
Keessumaa miira tajaajila ummataa iftoomina, ittigaafatamummaa, kabaja, haqummaa, al-loogummaa, hirmaachisummaa gonfachuun antummaasaanii qabatamaatti mirkaneessuu qabu.
Kana waliinis dandeettii, beekumsa, muuxannoofi tooftaa hogganummaa horatanitti fayyadamuun rakkoolee hawaas-dinagdeefi siyaasaa biyyattii mudatan irraa jalaan furuuf qindoominaan hojjechuu qabu.
Rakkoolee hanga har’aatti walxaxaa ta’uun mudachaa jiraniifi fala barbaadan, fakkeenyaaf, malaammaltummaa, sassaabdummaa kiraa, qisaasama qabeenyaa, dhimmi nagaafi tasgabbii kanneen eeramaniidha.
Rakkooleen kunniin akka furamaniif irra deddeebiin ummataan gaafatamaa turaniiru. Hanga har’aattis rakkoolee hinfuramne waan ta’eef, furuufis muudamtootni kunneen akka waliigalaatti ammoo miseensonni kaabinee marti kutannoodhaan tattaafachuun aantummaa ummataaf qaban dhugoomsuu qabu.
Torban kana/This_Week 9627
Guyyaa mara/All_Days 1819047